दर्शक बुझ्ने भैसके त्यसैले विदेशी सिनेमासँग डराउनु पर्दैन् : झरना थापा « THE CINEMA TIMES
उपन्यास ‘लू’को निर्देशन गर्दै प्रदीप भट्टराई
दर्शकले रुचाए ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’को गीत, जम्यो पुजा र सोनमको केमेष्ट्री !
अदिती र धिरज अभिनित ‘बाबरी’को हंगकंग राइट्स बिक्रि
‘प्रेमगन्ज’को शीर्ष गीत ‘माथि माथि आकाशमा’ रिलिज
पुष्प र श्रद्धा अभिनित ‘कृष्ण लीला’को ‘ए मेरो हजुर’ गीत रिलिज
प्रिमियर शोमा ‘घनचक्कर’लाई मिश्रित प्रतिक्रिया
शुक्रबारबाट हलमा ‘घनचक्कर’ रिलिज
दर्शक बुझ्ने भैसके त्यसैले विदेशी सिनेमासँग डराउनु पर्दैन् : झरना थापा
सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापा आगामी बैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको सिनेमा ‘ए मेरो हजुर ४’को प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् । निर्देशक थापाको निर्देशनमा निर्माण भएको यो तस्रो सिनेमा हो ।
सिनेमाको सार्वजनिक गीतसंगीत तथा ट्रेलरले दर्शकबाट उत्कृष्ट पतिक्रिया पाइरहेको छ । अभिनेत्री तथा निर्देशक थापाले सिनेमाको प्रचार सामाग्रीमा दर्शकबाट मिलेको प्रतिक्रिया आफु निकै उत्साहित भएको बताउँछिन् । हामीले सिनेमा मेहनत गरेर बनाएको र दर्शक पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै बुझ्ने भैसके त्यसैले बलिउड र हलिउडका जुनसुकै सिनेमा आएपनि फरक नपर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
निर्देशक थापाले आफु अभिनेत्रीमा २० बर्षसम्म सिकेको अनुभव अहिले निर्देशनमा लगाई रहेकाले पनि आफ्नो हरेक सिनेमाले दर्शकको साथ पाइरहेको बताउँछिन् । यदी आफुले अभिनेयबाट राम्रो दर्शक नकमाएको भए अहिले निर्देशकको रुपमा सफल बन्न निकै सकस पर्न सक्थ्यो । तर, अभिनयमा कमाएका दर्शकले अहिले निर्देशक बन्दा पनि साथ दिएको उनको भनाई छ ।
हामी निर्देशक बनिसक्दा पनि राम्रो कथा बनिरहँदा आफै अभिनय गरौं जस्तो लाग्दैन् ? भनेर सोधेको प्रश्नमा निर्देशक थापाले आफु अहिले निर्देशकमा नै ठिक छु भन्ने लाग्न थालेको बताइन् । तर, सिनेमामा राम्रो गीतहरु बन्दा भने यो गीतमा चाँही मैले नै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाँही लाग्ने गरेको सुनाइन् । ‘ए मेरो हजुर २’ कै गीत ‘किनी देउन साँइला दाई’ गीतको छायांकन गरिरहँदा यो गीतमा आफैले अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ लागेको उल्लेख गरिन् ।
सिनेमा ‘ए मेरो हजुर ४’ मा अनमोल केसी, सुहाना थापा, सलोन बस्नेत, रवि गिरी, सरोज खनाल, लुनिभा तुलाधर, रक्षा गौतम लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेको फिल्ममा मित्र डि गुरुङको सम्पादन, रामजी लामिछाने र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी र हिमाल केसीको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ ।
सिनेमाको कथा निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाले लेखेकी हुन् । सुहाना इन्टरटेनमेन्ट र सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमाको पटकथा र संवाद लेखनमा निर्देशक थापालाई स्व। निर्देशक छेतेन गुरुङ, मन्दिप गौतम, प्रतिक पौडेल, बाबुराम दाहाल, उपकार पाण्डे र माधव शर्माले सघाएका छन् ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – नयनराज पाण्डेको चर्चित उपन्यास ‘लू’लाई प्रदिप भट्टराईले निर्देशन गर्ने भएका
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सुदर्शन थापा निर्देशित सिनेमा ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’को सार्वजनिक गीत ‘जरुरी
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – अदिती बुढाथोकी र धिरज मगर अभिनित सिनेमा ‘बाबरी’को हंगकंग राइट्स
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – परिच्छेद सेनको डेब्यू निर्देशन रहेको सिनेमा ‘प्रेमगन्ज’को शीर्ष गीत ‘माथि
'प्रेमगन्ज'को शीर्ष गीत 'माथि माथि आकाशमा’ रिलिज
दीपेन्द्र लामा निर्देशित '२ नम्बरी' फर्स्टलुक पोस्टर सार्वजनिक
सौगात र सृष्टि अभिनित 'माईकल अधिकारी'को फर्ष्टलुक पोस्टर